म्यानचेष्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक सोल्सगेयर बर्खास्त - नागरिक रैबार
आइतवार, मंसिर ५, २०७८
काठमाडौं । म्यानचेष्टर युनाइटेडले प्रशिक्षक ओले गनर सोल्सगेयरलाई बर्खास्त गरेको छ । आइतबार वाटफोर्डसँग ४–० को लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि युनाइटेडले सोल्सगेयरलेलाई हटाएको हो ।
यो हारसँगै युनाइटेड प्रिमियर लिगमा लिडर चेल्सीभन्दा १२ अंक पछाडि परेको छ । खराब लयमा रहेको युनाइटेडले लिगमा पछिल्लो सातमध्ये एक खेल जितेको छ भने लिभरपुलसँग ५–० र म्यानचेष्टर सिटीसँग २–० को हार व्यहोरेको छ ।
४८ वर्षका सोल्सगेयर डिसेम्बर २०१८ मा युनाइटेडका अन्तरिम प्रशिक्षक बनेका थिए । जोजे माउरिन्हो बर्खास्त भएपछि अन्तरिम प्रशिक्षकको भूमिका पाएका उनलाई युनाइटेडले २०१९ मार्चमा पूर्ण रुपम प्रशिक्षक बनाएको थियो । उनले जुलाइमा मात्र २०२४ सम्मको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्षका लागि ओली भर्सेस रावल
म्यानचेस्टर सिटीले घरेलु मैदानमा पिएसजीलाई हरायो
फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) लाई हराउँदै म्यानचेस्टर सिटी यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूह ए को विजेताको रूपमा अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गरेको छ। सिटीले घरेलु मैदानमा पिएसजीलाई २-१ गोल अन्तरले हराउँदै समूहमा अन्तिम खेल अगाडि ४ अंकको स्पष्ट अग्रता लिएको हो।पहिलो हाफसम्म गोलरहित बराबरी रहेको खेलको दोस्रो हाफमा पिएसजीले अग्रता लियो। खेलको […]
च्याम्पियन्स लिग फुटबलः चेल्सीको फराकिलो जित
काठमाडौं, ८ मंसिर । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा चेल्सीले फराकिलो जित निकालेको छ ।मंगलबार राति भएको खेलमा चेल्सीले युभेन्ट्समाथि ४–० गोलको फराकिलो जित निकालेको छ । चेल्सीको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा २५ औं मिनेटमा ट्रिभोअ चालोवाहले गोल गर्दै चेल्सीलाई सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । ५५ औं मिनेटमा रिस जेम्सले गोल गर्दा चेल्सीले अग्रता दोब्बर बनायो । […]
पेड्रीले जिते गोल्डेन ब्वाई अवार्ड
काठमाडौं । स्पानिस क्लब बार्सिलोना युवा खेलाडी पेड्रीले ‘गोल्डेन ब्वाई’ अवार्ड जितेका छन् । टुटस्पोर्ट्सले युरोपका २१ वर्षमुनिका उत्कृष्ट खेलाडीलाई गोल्डेन ब्वाई अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । अवार्ड जित्ने क्रममा १८ वर्षीय मिडफिल्डर पेड्रीले बोरुसिया डर्टमण्ड तथा इंग्ल्याण्डका जुड बेलिङघमलाई पछि पारे । यस अवार्डका लागि ४० पत्रकारले भोटिङ गरेका थिए र २६ जनाले […]
ए डिभिजन लिगमा आर्मी र पुलिसबीच १-१ को बराबरी
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले १-१ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको दुई विभागीय क्लबको प्रतिस्पर्धामा ५१ औं मिनेटमा सन्तोष हेमरुनले तेज तामाङको फ्रिकिकमा गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाए । तर १० मिनेटपछि नै वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश […]
पैठमेला फुटबल कपको उपाधि बाजुरा जिल्लालाई
नागरिक रैबार/बाजुरा ५ मंसिर । कालिकोट जिल्लाको पताला गाउँपालिका वडा नं. ९ ले आयोजना गरेको पैठमेला फुटवल कपको उपाधि बाजुरा जिल्लाले हात पारेको छ । आईतबार सम्पन्न भएको फाईनल खेलमा एलजि वाईसी क्लवलाई १-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै बाजुरा जिल्लाले खेलको उपाधि जितेको हो । प्रतियोगिता मंसिर १ गतेबाट कालिकोट जिल्लाको पताला गाउँपालिका वडा नं. […]
फ्रेन्च लिगमा मेसीको पहिलो गोल, पीएसजीलाई १२ अंकको अग्रता
काठमाडौं । लिओनल मेसीले फ्रेन्च लिग वानमा पहिलो गोल गर्दा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले नान्ट्सलाई ३-१ ले पराजित गरेको छ । दोस्रो हाफमा केलर नाभासले रातो कार्ड पाएपछि १० खेलाडीमा समेटिए पनि पीएसजीले जित हात पारेको हो । जितपछि पीएसजीले शीर्ष स्थानमा १२ अंकको आरामदायी अग्रता बनाएको छ । घरेलु मैदान पार्क डे प्रिन्समा भएको […]